» विश्वकै सबभन्दा सानो गौमाता…हेर्नुहोस् । सेयर गरौ ! विश्वकै सबभन्दा सानो गौमाता…हेर्नुहोस् । सेयर गरौ ! – yuwa Awaj
Yuwa Aawaj 335 Views
एजेन्सी : हालै अमेरिकामा एउटा एकदमे सानो गाई भेटिएको छ ।सामान्य गाईको तुलनामा यो गाईको तौल ४.५ किलो रहेका छ । यो गाई विश्वकै सबैभन्दा सानो गाई हो । सामान्य गाईभन्दा १० हिस्सा सानो यो गाईको नाम लिटिल बिल हो ।
गाईको मालिकले गाई बिरामी भएको हुनसक्ने भन्दै भेटेनरी लगेका थिए । तर, चिकित्सकले गाई पूर्ण स्वस्थ रहेको बताएका छन् ।
गाई सामान्य गाईको तुलनामा सानो मात्रै भएको अन्य कुनै रोग नभएको चिकित्सकले बताएका छन् ।अस्पतालमा यस्तो विचित्रको गाई हेर्न भीड जम्मा भएको थियो । चिकित्सकले गाईको एक तस्विर पनि आफ्नो फेसबुक फेजमा शेयर गरेका छन् । गाई किन यति सानो भएर जन्मियो भनि चिकित्सकले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । LilBill भनि अहिले यो गाई सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।